Nahafinaritra i Miranda Kerr hita tamin'ny bikan'ny sary tao Malibu
Ny tsaho dia ny hoe Malibu dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny modelin'i Miranda Kerr izay 33 taona. Eto izy dia tsy mitoetra fotsiny amin'ny namana sy Evan Spiegel malalany, fa miasa koa. Omaly, ny paparazzi dia nahavita nitifitra an'i Miranda nandritra ny dingan'ny sary, fa kosa ho an'ny fanontana napetraka tao anaty kiraro, dia mbola mistery foana.
Kerr fotsiny "mamirapiratra" amin'ny fahasambarana
Niasa tamin'ny mpaka sary ny maraina vao maraina. Miranda teo anoloan'izy ireo i Miranda tamin'ny sary telo samihafa. Ny voalohany dia tsotra sy tsotra. Tonga teny amoron-dranomasina ilay zazavavy tao anaty bikini mainty, mitazona saron-tava mba hilomano. Ny sary faharoa dia faly kokoa. Ny Stylists dia nanisy akanjo miloko mavokely mavokely sy fotsy miaraka amin'ny taratasy manga. Tao anatin'izany, tsy nanolo-tena irery izy, fa niaraka tamin'ny vondrona fakan-jiro nivezivezy nanodidina azy. Raha jerena ny fomba nifandraisan'ilay modely tamin'ny mpiara-miasa aminy, dia tsy nahafaly azy ny niasa, fa ny fotoana laniny malalaka niaraka taminy. Fa ny sary fahatelo no tena mahaliana indrindra. Nipoitra teo anoloan'ny mpaka sary i Kerr tamin'ny kofehy mainty hoditra sy ny akanjo fotsy mainty ary fotsy lava. Ny sary dia feno solomaso avy amin'ny masoandro.
Taorian'ny nahitàn'ireo sary avy any Malibu tao amin'ny Internet, maro ireo mpankafy an'i Miranda no nanintona ny saina fa ilay zazavavy dia "mamirapiratra" amin'ny fahasambarana. Izany no nosoratan'izy ireo tao amin'ny Internet: "Inona no nitranga taminy? Ny masony dia mamirapiratra miaraka amin'ny fahasambarana "," Heveriko fa ity toe-javatra ity dia vokatry ny fitiavana sy fampakaram-bady haingana miaraka amin'i Evan Spiegel "," Tena faly izy. Ny fihetseham-po marina dia tsy azo atao toy izany. Faly aho an'i Miranda, sns.
Mety tsy ho ela i Kerr no manambady?
Andro vitsy lasa izay, ny paparazzi "ubiquitous" dia "nahatratra" an'i Evan sy Miranda niaraka tamin'ny namana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Nobu tao Malibu. Taorian'ity fiaraha-misakafo ity dia navoaka tamin'ny mpanao gazety ny tenin'ny namana iray avy amin'i Kerr, izay nilaza fa hanao tolotra ho an'ny malalany i Der Spiegel. Izao no nolazainy tamin'ny Gazety Us:
"Tsy azonao an-tsaina hoe tena faly i Miranda sy Evan. Tena adala izy ireo ary tena maniry ny hiara-hiaina sy hanorina ny fianakaviany. Ny Spiegel dia efa nifidy kinga iray ho an'ny Kerr, saingy mbola tsy naseho azy hatramin'izao. Amin'ny ankapobeny dia te hanolotra tolo-kevitra amin'ny atmosfera akaiky izy, tsy misy olon-tsy fantatra, ary tsy misy teratany. "
Etsy ankilany, enim-bolana lasa izay, tao amin'ny gazety dia nisy ny fampahalalam-baovao fa hanomboka hanambady ny tanora, saingy noho ny fifanaraham-panambadiana, izay nanamafisan'i Der Spiegel, dia nakatona ny fampakaram-bady. Ka angamba izao i Evan sy Miranda dia nahavita nifanaraka, satria tsy misy antony fa ny modely tsotra dia "mamirapiratra" amin'ny fahasambarana.
Tsy te hiresaka momba ny herisetra an-tokantrano i Amber Hurd
Ny vadin'i Kurt Cobain
Herinandro taorian'ny nahaterahan'ny vady Cristiano Ronaldo dia nirohotra nankao amin'ny gym
I Catherine Boyd, ilay malala sy mpanampy dia lasa vadin'i Josh Brolin
Marion Cotillard dia nanova tanteraka ny sariny, nanjary blondy
Dita von Teese dia mikasa ny hanao choreografie
I James Conran sy Coco Rocha dia ho tonga ray aman-dreny fanindroany
Naomi Campbell, Kate Moss ary mpanjohy hafa tao anaty horonan-tsarimihetsika tao anaty horonan-tsary mampihetsi-po
Emily Ratjakovski dia nendasina tanteraka ho an'i Bazaar Harper
Goldie Hawn sy Kurt Russell miaraka amin'ny fanekeny "hanambady" any Hollywood
David Duchovny sy Gillian Anderson no nanambady?
Vin Diesel sy Duane Johnson dia nifamihina, nahavita asa teo amin'ny "Forsage 8"
Fanafody volo ho an'ny fahavoazana volo
Ny arina mikoriana - ny antony
Diaper-cocoon ho an'ny zaza vao teraka
Fanatanjahantena fanatanjahantena Adidas
Windbreaker amin'ny hazakazaka
Ahoana no hanamboarana tongolo lay?
Lily eo amin'ny lohasaha
Makeup 2018 - lamaody modia, fironana, vaovao, antitrends
Ahoana no hanamboarana holatra?
Famaranana taorian'ny fitsaratsaram-poana
Fanitsiana ny fantsika - ny antony sy ny fitsaboana
Hydrosalpinx sy ny bevohoka
Tetezam-baravarana ho an'ny trano fidiovana